ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “၀မ်းသာစရာ သတင်းတပုဒ်”
In Europe, Crete was ruled by non democratic government until 1970s.
Turkey, which is also in Europe, frequently experienced coups. Spain is fully democratic not long ago. Newly built Scotish parliment in Ediburgh isaclassic example of sleaziness and self important politicians, since all politicians and their assistants want corner office, it was built in suchaway that everyone sits in corner office and it isawhite elephant public project wasted tax payer money. In Poland, twins are running the country and they are not known to be too open minded or business friendly or agile or benevolent.
So it is not incorrect to claim that EU countries also have their own shortcomings. In my opinion, Singapore's PAP could easily won election in any European country.
မနေ့က ကိုယ့်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင် resultတွေကြည့်ပြီးရင်ခုန်လိုက်ရသေးတယ်။ဘာဘဲပြောပြောလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမယ်.မဲလိမ်မှူတွေမရှိဘူးဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအမှန်ပေါ်ထွက်လာဖို့်မခက်ဘူးဆိုတာမြင်သာပါတယ်။ တို့များရဲ့ နအဖကတော့ အဲဒီနှစ်ချက်ရဲ့ ပြောင်းပြန်နဲ့အညီကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာကလဲ မြင်သာလွန်းလှပါတယ်။
( အန်တီစု ကိုဒီနေ့မနက် CNA news မှာခဏလေးမြင်လိုက်ရတာရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်စိတ်ဓါတ်ခွန်အားအသစ်တွေကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်)
Anonymous>>>>>> Even in Singapore, if the ruling party dares to remove the unjust election laws and the strict control on the media, it will surely lose the majority win it has been enjoying so far. I think you have more confidence in them than themselves. :-)
But of course, if they were to use this election machinery and their control on the media, they could win any election, even on an alien planet.
ထနောင်းရေ.........နည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုရေစီးကြောင်းကလည်း ကျနော်တို့ဘက်မှာပါဗျာ။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ “ငါက အားလုံးထက် ခေါင်းတလုံးသာတယ်။ ငါလုပ်သမျှမှ အကောင်းဆုံး”ဆိုပြီး ငါတကော ကောနေတဲ့ အပြုအမူမျိုးကို လူအများက လက်မခံကြတော့ပါဘူးဗျာ။ အားလုံးဟာ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုလာကြပါပြီ။ ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဘယ်သူကမှ လူတဦးတယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ဘို့ ထည့်မပေးချင်ကြတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကြမ္မာကို ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ကိုယ့်ဘာသာဘဲ ဖန်တီးလိုကြပါတယ်။
Keep up the good post. Thanks for sharing the inner view of the country.